कम्पनी दर्ता गर्दा खसी उपहार – Narayani Dainik
DSLR सेवा प्रालिले ग्राफिक्स मार्गबाट कम्पनी दर्ता गर्दा खसी उपहार प्राप्त गरेका छन् । आज भरतपुर स्थित आफ्नै कार्यालयमा लक्की ड्रबाट खसी बिजेताको घोसणा गरिएको मार्गका संचालक जनक खड्काले जानकारी दिनु भयो ।
कम्पनी सम्वन्धी काम गर्दै आएको ग्राफिक मार्ग प्रा.लि. भरतपुर चितवनले दशै विशेष उपहार योजना अन्तरगत लक्कि ड्र मार्फत खसि उपहार वितरण गरेको छ । प्रा.ली.ले बिहीबार कार्यालयमा एक कार्यक्रको आयोजना गरि लक्कि ड्र खोलेको थियो । लक्कि ड्र मा ग्राफिक मार्ग मार्फत कम्पनी दर्ता गराएको डि.एस.एल.आर. सेवा प्रालीले खसि उपहार जित्न सफल भएको हो ।
गत साउन १ गते देखि असोज १५ गते सम्म कम्पनी दर्ता भई ग्राफिक मार्ग प्रा.लि. मार्फत कम्पनी दर्ता प्रमाण पत्र लिएका ५२ वटा कम्पनीलाई लक्कि ड्रमा सहभागि गराईएको ग्राफिक मार्ग प्रालीका प्रवन्ध निर्देशक खड्काले जानकारी दिनुभयो ।
बिहीबार दिउँसो १ बजे खसी उपहारको लागि लक्की ड्र खोल्ने कार्यक्रमा ग्राफिक मार्गवाट कम्पनी दर्ता गराएका कम्पनी सञ्चालकहरुको रोहबरमा ९ वर्षिय बालिका रोजिना पौडेलले कुप्पन तान्दा भरतपुर–१०, चितवनमा रजिष्टर्ड कार्यालय भएको डि.एस.एल.आर.सेवा प्रा.लि.का सञ्चालक सन्तोष कुंवरलाई खसी उपहार परेको हो । बिहीवारै एक कार्यक्रमका विच उपहार विजेता कुँवरलाई खसि हस्तान्तरण समेत गरिएको छ ।
साथै पुरस्कार वितरण कार्यक्रममा ग्राफिक मार्ग कम्पनि दर्ता, अध्यावधिक तथा कर सम्बन्धित कार्य गर्नको लागि चितवनको भरपर्दो सेवा केन्द्र रहेको भन्दै बिमल पौडेलले प्रसंसा गर्नु भएको थियो ।
बाँसका १५ उपयोगिताहरु: बनाए के बन्दैन ?